बढि फलाेवर्स भएका नेता अब ट्वीटरकाे निशानामा, किन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बढि फलाेवर्स भएका नेता अब ट्वीटरकाे निशानामा, किन ?
माइक्रो ब्लगिंग साइट ट्विटरकाे निशानामा अब नेताहरू पर्ने भएका छन् । बढि फलाेवर्स भएका त्यस्ता नेताहरू ट्वीटरकाे निशानामा पर्ने भएका हुन् । त्यतिमात्र हाेइन आपत्तिजनक र जनता भड्काउने खालका भाषण गर्ने त्यस्ता नेताहरू निशानामा पर्ने भएका हन् ।
हालै कम्पनिले साेसल मिडियामा जाेडिएका चर्चित नेता, भेरिफाइड यूजर्स र एक लाख भन्दा धेरै फलाेवर्स भएका यूजर का पाेष्टहरूमा ट्वीटरले खास ध्यान दिने भएकाे हाे । ट्वीटरले उसकाे याे नीति उलंघन गर्नेलार्इ सूचित गर्ने पनि जनाएकाे छ ।
गत बिहिवार ट्विटर सेफ्टीले अाफ्नाे ब्लग पाेस्टमा भनिए अनुसार याे सूचना स्क्रिन मै देखिने छ र जसमा क्लिक गरेर वा ट्याप गरेर युजर यसमा दिइएकाे सूचना हेर्न सक्छन् । याे युजरकाे हाेम टाइमलाइन, सचर् जस्ता स्थानहरूमा देखिने छ । युजरकाे ट्वीटका साथ एक फिका खैराे कलरमा बक्स पनि देखिन्छ । यसबाट थाहा हुन्छ कि याे पाेस्ट विवादित पाेस्ट हाे ।
ट्वीटरले पहिले विवादित पाेस्टलार्इ पनि अाउनबाट राेकेकाे थिएन किनकी याे जनसमुदायकाे चासाे रहने उसकाे विश्वास थियाे । र, उनीहरूलार्इ यसमा कसरी बन्देज गर्ने भन्ने पनि फुरेकाे थिएन । अब भने ट्वीटरले जाे सरकारी अधिकारी वा नेता छन् र जसका फलोवर्स लाख भन्दा बढि छन् , उनीहरूलार्इ चासाेका साथ हेर्ने जनाएकाे छ ।
यस प्रकारकाे कामका लागि ट्वीटरले क्रस फङ्सनल टीमलार्इ खटाएकाे छ । जसमा ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी, पब्लिक पाेलिसी र रिजनल टीमका कर्मचारी सामेल छन् । उनीहरूले तय भएकाे मापदण्डका अाधारमा जनताकाे हितमा छ छैन जाँच गर्नेछन् ।
असार ३० गते, २०७६ - २०:२३ मा प्रकाशित